Ndị ọzọ na TeamViewer maka enyemaka dịpụrụ adịpụ 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
TeamViewer bụ ihe ịrụ ụka adịghị ya na usoro enyemaka enyemaka dịpụrụ adịpụ n'ụwa niile, na-ekelekwa arụmọrụ pụrụ iche ya na ọnọdụ netwọkụ niile (ọbụlagodi na netwọk ADSL na-arụ ọrụ na-enweghị nsogbu) yana ekele maka ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ dịka nnyefe faịlụ dịpụrụ adịpụ na nwelite ntanetị na-akpaghị aka (bara uru maka imelite mmemme ahụ na PC nke ndị ọrụ novice). Otú ọ dị, ọ dị mwute ikwu na Efu nke TeamViewer n'efu ị nwere oke oke: ọ gaghị ekwe omume iji ya na ọnọdụ azụmahịa, a na-enyocha ụdị njikọ (iji chọpụta ma ọ bụrụ na anyị bụ ndị ọrụ nkeonwe) ma ọ gaghị ekwe omume iji rụọ ọrụ vidiyo vidiyo ma ọ bụ nbipụta dịpụrụ adịpụ na-enweghị ịgbalite ikike onye ọrụ.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ inye enyemaka dịpụrụ adịpụ ma ọ bụ nyere ụlọ ọrụ anyị aka na-enweghị ịkwụ ụgwọ ego ọ bụla, na ntuziaka a anyị ga-egosi gị ndị ọzọ kachasị mma na TeamViewer maka enyemaka dịpụrụ adịpụ, yabụ ịnwere ike ijikwa kọmputa ọ bụla n’enweghị oge ma ọ bụ oge.
ỌG REGAD AKW :KWỌ: Remote desktọọpụ omume jikọọ remotely kọmputa
Ihe ndi ozo di nma na TeamViewer
Ọrụ ndị anyị ga-egosi gị nwere ike iji mpaghara ọ bụla, gụnyere ndị ọkachamara: mgbe ahụ, anyị nwere ike ịchịkwa PC remotely na nye oru aka na-enweghị akwụ ụgwọ euro. Ọrụ ndị a nwekwara adịghị ike (ọkachasị na njirimara dị elu) mana ọ nweghị ihe ga-egbochi nkwado. Maka ọdịmma, anyị ga-egosi gị naanị ọrụ enyere dị mfe iji hazie dị ka TeamViewer Ọbụna maka ndị ọrụ nwere obere ahụmahụ (site na nke a, TeamViewer ka bụ onye isi ụlọ ọrụ).
Desktọọpụ nke dịpụrụ adịpụ nke Chrome
Ngwakọta TeamViewer kachasị mma ị nwere ike iji ugbu a bụ Desktọọpụ nke dịpụrụ adịpụ nke Chrome, enwere ike ibudata Google Chrome na PC niile ma wụnye ihe nkesa (na PC a ga-achịkwa) na ndị ahịa (na PC anyị nke anyị ga-esi nye aka).
Anyị nwere ike ịhazi enyemaka dịpụrụ adịpụ ngwa ngwa na Desktọpụ Remote Chrome site na ịwụnye nkwụnye ihe nchọgharị (anyị mepee saịtị sava ma pịa Wụnye na pc), na -e copomi koodu pụrụ iche emere maka otu a na, na-akpọrọ anyị gaa na peeji nke ndị ahịa na otu anyị, na-abanye koodu ahụ. Na ngwụcha ntọlite ​​ahụ, anyị ga-enwe ike ịlele desktọọpụ maka enyemaka ngwa na ọsịsọ! Anyị nwekwara ike ịwụnye akụrụngwa ihe nkesa na ọtụtụ PC ma chekwaa ha na peeji nkwado anyị n'okpuru aha dị iche iche, ka anyị nwee ike ịchịkwa kọmputa abụọ ma ọ bụ karịa na-enweghị nsogbu. A ga-ejikwa Desktọpụ Latịn Chrome site na ama, dị ka a hụrụ na ndu ahụ Desktọpụ Remote Chrome site na ekwentị (Android na iPhone).
Ọzọ free Downloader inye ime enyemaka bụ Iperius desktọọpụ, dị ka naanị sọftụwia dị na peeji ibudata gọọmentị.
Ihe omume a bu ihe ntughari, gha eme ka ndi mmadu nweta ihe omuma ha na ndi ahia ha. Iji mee njikọ dịpụrụ adịpụ, malite mmemme na PC ka a na-achịkwa ya, họrọ okwuntughe dị mfe n'ọhịa nke otu aha ahụ, detuo ma ọ bụ ka anyị gwa gị koodu ọnụọgụ nke dị n'elu wee banye ya na Desktọpụ Iperius Remote malitere na kọmputa anyị, n'okpuru isiokwu NJ jikọọ; Ugbu a, anyị pịa bọtịnụ Njikọ ma tinye paswọọdụ, iji nwee ike ịchịkwa desktọọpụ na inye enyemaka dị mkpa. Usoro ihe omume a na-enye anyị ohere iburu ID nke anyị jikọtara na ya ma na-enyekwa nhọrọ nnweta niile a na-eleghị anya (ịhọrọ paswọọdụ nnweta tupu oge eruo): n'ụzọ dị otu a ezuola ịmalite mmemme ahụ na akpaaka iji nye aka ozugbo.
Nkwado Microsoft ọsọ ọsọ
Ọ bụrụ na anyị nwere PC nwere Windows 10 anyị nwekwara ike iji uru nke ngwa ahụ Enyemaka ngwa ngwa, dị na menu mmalite na ala aka ekpe (naanị chọọ aha ahụ).
Iji ngwa a dị ezigbo mfe: anyị na-emepe ngwa na kọmputa anyị, pịa Enyemaka onye ọzọ, banye na akaụntụ Microsoft (ọ bụrụ na anyị enweghị nke anyị nwere ike ịmepụta otu na ofufe n'efu), ma rịba ama nyere koodu ụgbọelu. Ugbu a, ka anyị gaa na kọmputa nke onye a ga-aga, mepee ngwa ngwa ngwa ngwa ma tinye koodu onye ọrụ anyị: otu a anyị ga-enwe njikwa zuru oke nke tebụl ma nwee ike inye ụdị enyemaka ọ bụla, na-enweghị oge. Usoro a na - agwakọta ọsọ nke RDP na mma nke TeamViewer, na - eme ya Ngwaọrụ Navigaweb.net kwadoro.
Ọ bụrụ na anyị nwere ọtụtụ kọmpụta nwere sistemụ arụmọrụ dị iche iche iji chịkwaa remotely, naanị ihe ngwọta zuru oke na imeghe ihe anyị nwere ike nzọ na bụ Ọrụ DWS, configurable ozugbo na ukara website.
Enwere ike iji ọrụ a ozugbo site na ihe nchọgharị ahụ, ọbụlagodi maka ndị na-enye aka. N'ihu anyị na-ebudata ya DWAgent na kọmputa (ma ọ bụ kọmputa) ka enyere gị aka, malite ya na PC ma rịba ama ID na paswọọdụ chọrọ maka njikọ ahụ; Ugbu a, ka anyị gaa na kọmpụta anyị, ka anyị mepụta akaụntụ efu na saịtị ahụ ị hụrụ n'elu, ma tinye kọmputa ahụ na ID na paswọọdụ. Site ugbu a gaa n'ihu, anyị ga-enwe ike inye aka site na imeghe ihe nchọgharị ọ bụla na ịbanye n'ime akaụntụ anyị, ebe a ga-ahụ kọmputa ndị nwere ike ịchịkwa. Ebe ọ bụ na enwere ike itinye ihe nkesa na Windows, Mac na Linux DWService bụ nhọrọ kacha mma maka nnukwu ụlọ ọrụ ma ọ bụ maka ndị nwere ọtụtụ kọmputa.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ inye ndị enyi ma ọ bụ ndị ezinụlọ anyị enyemaka dịpụrụ adịpụ anyị nwekwara ike iji ọrụ ọ na-enye UltraViewer, inweta site na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị.
Anyị nwere ike ịtụle ọrụ a dịka otu Vdị TeamViewer Lite,, ebe ọ nwere interface yiri nke ahụ na usoro njikọ njikọ yiri nke a. Iji jiri ya, n'eziokwu, bido ya na kọmpụta ka a ga-achịkwa ya, detuo ID na paswọọdụ wee banye na ya na mmemme mmemme na kọmputa onye enyemaka, iji nwee ike ijikwa desktọpụ ahụ n'ụzọ dịpụrụ adịpụ na enweghị windo mgbasa ozi ma ọ bụ akwụkwọ ịkpọ òkù ka ịgbanwee gaa na Pro Version (njedebe niile TeamViewer mara).
Onweghi uzo ozo ndi ozo diri TeamViewer ma ha dikwa nfe iji ma hazie, obuna ndi oru novice nwere udiri ngwanrọ a (n'ezie, gwa ha ID gi na okwuntughe anyi nyere onye ozo anyi aka ka iga niru). Ọrụ ndị anyị gosiri gị nwekwara ike iji gị na gburugburu ebe ndị ọkachamara (belụsọ UltraViewer, nke bụ n'efu maka ojiji nkeonwe), na-enye ụzọ ọzọ dị mma na ikikere TeamViewer dị oke ọnụ maka azụmaahịa.
Maka ozi ndị ọzọ gbasara mmemme enyemaka dịpụrụ adịpụ, anyị na-akpọ gị oku ka ị gụọ ntuziaka anyị Esi gbanye PC remotely na-arụ ọrụ remotely mi Etu esi ejikwa kọmputa n’Intanet.
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ iji aka gị chịkwaa Mac ma ọ bụ MacBook, anyị nwere ike ịgụ isiokwu anyị Olee otú ịchịkwa Mac ihuenyo remotely.
LibreOffice Calc: ihe kachasị mma na Excel
Esi emeghe faịlụ CSV n'ụzọ ziri ezi
Esi edozi ntọala kamera (iche na nchapụta) na Windows PC
Otu esi abanye mbugharị mgbe ị natara oku
Puta na ogbako vidiyo nwere 3D avatar nke n’aga dika anyi
Igwe ojii kachasị mma ịchekwa faịlụ na ntanetị
Tinye iwu na enyo PC gị
Tọghata MKV ka AVI ma ọ bụ kpọọ MKV na DVD
Mepụta foto panoramic na foto ogo ogo 360 n'ịntanetị na PC gị
Gwakọta egwu na PC na mmemme DJ n'efu
Chee banyere desktọpụ PC gị: akwụkwọ ahụaja nwere foto collages, ihe ngebichi 3D na wijetị
Virtual 3D microscope n'ịntanetị na enweghị nbudata na kọmputa gị